East Phillipines Sea « MMWeather Information BLOG
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W နှင့် 13W တို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 11W, 12W, 13W, East Phillipines Sea, EAST-CHINA-SEA, South China Sea, UTOR, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက် ၂၇ လုံးမြောက် မုန်တိုင်း WUKONG
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 27W, East Phillipines Sea, LPA, WUKONG ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်(ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း)တွင် ၁၈ လုံးမြောက် မုန်တိုင်း JELAWAT ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 21st, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် ညပိုင်းက ဂူအမ်ကျွန်း အရှေ့ဘက်တွင်စတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W သည် အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်၌ ၁၈ လုံး မြောက် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း JELAWAT အား ဖိလစ်ပိုင်အမည် LAWIN ဟု ပေးထားပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၆၃၀ ခန့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဗဟိုပြုလျှက် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
. . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်(ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း)တွင် ၁၈ လုံးမြောက် မုန်တိုင်း JELAWAT ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
3 comments မုန်တိုင်းသတင်း 18W, East Phillipines Sea, JELAWAT, LAWIN, NWpacific ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 15W, 96W, 97W, 98W, East Phillipines Sea, NW-Pacific, TEMBIN ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်းနှင့် လေဖိအားနည်းဆဲလ်များ၏ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on July 30th, 2012%
ဇူလိုင် ၃၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၉၃၀ နာရီ၊ မုန်တိုင်း SAOLA (10W) နှင့် မုန်တိုင်း DAMREY(11W) တို့၏ လမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းပုံဖြစ်ပါသည်။
ဇူလိုင် ၃၀ ရက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သည့် TYPHOON2000 မှ အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်း SAOLA (10W) သည် လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း ပိုမို အားကောင်းလာပြီး တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကာ မူလ ခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းအရွယ်အစားမှာလည်း အချင်း ကီလိုမီတာ ၈၉၀ အထိ ရှိလာသည့် ကြီးမားသော မုန်တိုင်းအရွယ်အစား ဖြစ်လာကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟို၌ . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်းနှင့် လေဖိအားနည်းဆဲလ်များ၏ အခြေအနေ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 10W, 11W, DAMREY, East Phillipines Sea, NW-Pacific, SAOLA ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း SAOLA နှင့် DAMREY
By mmweather.ygn, on July 29th, 2012%
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း(TS) အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့် SAOLA(ဖိလစ်ပိုင်အမည် – GENER) (10W)သည် မနီလာ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၃၈၀၊ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း-တိုင်ပေမြို့ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ၅၇၀ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည့် ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း၊ မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၁ ကီလိုမီတာ နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL နှင့် TYPHOON2000 အချက်အလက်များအရ သိရပါသည်။ မုန်တိုင်း SAOLA သည် လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း(သြဂုတ်လ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီမတိုင်မီ) အင်အား . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း SAOLA နှင့် DAMREY
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 10W, 11W, East Phillipines Sea, NW-Pacific လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W နှင့် 95W
Leaveacomment မိုးလေဝသအခြေအနေ, မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး Andaman Sea, Bay of Bangal, East Phillipines Sea, NW-Pacific, South China Sea Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum